NLD ကို အနိုင်ရစေချင်လို့ မဲမသမာမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်နိုင်က ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာ တကယ်လား ? – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံရေး>>NLD ကို အနိုင်ရစေချင်လို့ မဲမသမာမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးမြင့်နိုင်က ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာ တကယ်လား ?
တွေးပြီးမှယုံDecember 4, 2020
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းတုတွေကတော့ မကြာခဏအလိုလိုကို ပြန့်နှံ့လာနေပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်လည်း ဒီဇင်ဘာ၊ ၁ရက်နေ့မှာ ရဲဇာနည်ဆိုတဲ့ အကောင့်တုတစ်ခုကနေ ယခုသတင်းတုကို ဖြန့်ဝေထားခဲ့ပြီးတော့ ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း ၄၂၇ ဦးရှိခဲ့သည်။ သတင်းတုထဲမှာဆိုရင် “ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ကို သောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်စေလိုတာကြောင့် လူတစ်ဦးကို မဲနှစ်မဲပေးခိုင်းခြင်း၊ အသက်မပြည့်သေးသူတွေကို မဲပေးခိုင်းခြင်း၊ NLD ပါတီကို ပေးတဲ့မဲက ပယ်မယ်ဖြစ်နေပေမဲ့ မပယ်ခဲ့ပဲ ခိုင်လုံမယ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ စတဲ့ မဲသမမာတာတွေကို လုပ်ခဲ့ကြောင်း UEC တွင်း/မှူးက ဝန်ခံပြောကြားပေမဲ့ တပ်မတော်က မြို့နယ်ပေါင်း(၂၁၈) မြို့နယ်က တပ်ပြင်မဲရုံက မဲစာရင်းစာတမ်းတွေကို စစ်ဆေးဖို့ တောင်းတာကိုတော့ ကိုယ်သေတွင်းကိုယ်တူးသလို ဖြစ်တာကြောင့် ခွင့်ပြုမှာမဟုတ် လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်” လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီသတင်းတုကို ဒီနေရာမှာ ဖြန့်ဝေနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးပြီးမှယုံကနေ အချက်အလက်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာတော့ အောက်က အချက်အလက်တွေအရ သတင်းတုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းတရားဝင်မီဒီယာများတွင် ယင်းသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားခြင်းမျိုးကို ရှာဖွေမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC) ၏ Facebook Page မှာလည်း ဒီသတင်းဟာ သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း ဒီလို ပြန်လည် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
သတင်းကို တင်ထားခဲ့သည့် အကောင့်မှာလည်း စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ကမှ စတင်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်ဆက်သည့် သတင်းတု/မှားတွေကိုသာ ဖြန့်ဝေနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ဒီလိုသတင်းတုတွေဟာဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူအများတွေဝေစေရန် ရည်ရွယ်ဖန်တီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ သတင်းတု/မှားတွေက အဆက်မပြတ်ပျံ့နှံ့နေပါတယ်နော်။ အဲ့လိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ရဲ့ တရားဝင်ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာလည်း သတင်းတုဖြစ်ကြောင်း မကြာခဏဖော်ပြပေးနေပါတယ်နော်။ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ အခုလို အခြေအမြစ်မရှိ ဖော်ပြလာတဲ့ သတင်းတွေကို လွယ်လင့်တကူမယုံကြည်ကြပဲ တရားဝင်မီဒီယာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသာ ယုံကြည်ကြဖို့ရာ တိုက်တွန်းပါတယ်။